Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseDashi Ama-Donyell Malen Ingane Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Football genius eyaziwa kakhulu ngokuthi "Malen". Indaba yethu ye-Donyell Malen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube yimanje.
Impilo kanye nokuvuka kukaDonyell Malen. Isikweletu Sezithombe: Instagram, I-Ad.nl futhi I-Nos.nl.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe okushaya amanzi kanye nefomu lokushaya amagoli eliqhubekayo. Kodwa-ke bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaDonyell Malen's okuthakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso we-Donyell Malen Ingane Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
UDonyell Malen wazalwa ngosuku lwe-19th lukaJanuwari 1999 eWieringen eNetherlands. Wazalwa kule nyunyana phakathi kukanina, uMariska Manshanden noyise, uRobert Malen.
Umama kaDonyell Malen uMariska Manshanden. Isikweletu Sezithombe: I-Volkskrant.
Isizwe samaDashi sobuzwe obuxutshwe nezimpande zaseSurinamese sakhulela endaweni yakhe yokuzalwa edolobhaneni laseWieringen eNorth Holland, eNetherlands lapho akhulela khona ngaphandle kwabafowethu nodadewabo bemvelo.
UDonyell Malen wakhulela eWieringen eNorth Holland, eNetherlands. Ama-Credits Ama-Image: I-Ad.nl kanye ne-VisitNetherlands.
Ukukhula eWieringen, uMalen osemncane wayengumfana omnyama owayevelele emzaneni omhlophe ngenxa yekhono lakhe langaphambi kwesikhathi lokufaka emidlalweni yokuncintisana yeklabhu yeVV Succes lapho wayeneminyaka emine kuphela ubudala.
Amaqiniso we-Donyell Malen Ingane Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngesikhathi uMalen wayeseneminyaka eyi-5 e-2004, waqala umsebenzi onamandla wokusebenzela e-HVV Hollandia lapho echithe iminyaka engaphansi kweminyaka ye-3 efunda ubuchwepheshe obusha. Ngenkathi uMalen esenayo, wakhuthazeka ukuba abe yilungu eliyisihluthulelo senhlangano yebhola lezinyawo e-top-club kanye neqembu lesizwe laseDashi.
Isithombe sika-Throwback sika-8 oneminyaka engu-Donyell Malen egqoke ijezi leqembu lesizwe. Isikweletu Sezithombe: Isikhangiso.nl.
Njengoba iminyaka ihamba, impilo kaMalen yaphenduka ezungeze ibhola. Ngakho-ke, "waphuka kakhulu" ukuze akwazi ukuzenzela impilo ecebile ngaphandle komdlalo ngenkathi igumbi lakhe ekhaya limqinisa kakhulu ebhloka likanobhutshuzwayo njengoba lalihlotshiswe ngamaphosta weqhawe lakhe lobuntwana kanye nomeluleki Ronaldinho.
Amaqiniso we-Donyell Malen Ingane Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuba u-Malen oneminyaka engu-9 angeniswe ezinhlelweni zentsha ze-Ajax lapho asebenzisa khona isikhathi esiningi (cishe ngeminyaka ye-8) yomsebenzi wakhe wobutsha ecabanga ukuhweba kwakhe njengomhlaseli omuhle kakhulu.
UDonyell Malen (okokuqala ukusuka kwesokudla) ezinhlelweni zentsha ze-Ajax e2011. Uyabona Matthijs De Ligt noJustin Kluivert? Isikweletu Sezithombe: I-Ajax.nl.
Ngenkathi abaphathi be-Bja juniors enethalente be-Ajax besazokwazisa uDonyell ngezinhlelo zayo, i-Arsenal yafika yalanda isikwati sebhola ngokuhlinzekwa kwejusi.
Amaqiniso we-Donyell Malen Ingane Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
I-Arsenal yenze kahle ezivumelwaneni zayo noDonyell okubandakanya ukumenza abonakale emidlalweni eminingi yePremier League League okubuye kwaveza ukuthi isebangeni lakhe lokudlalela iqembu eliphakeme leqembu ngesikhathi I-Gunners 2-0 inqoba iSydney FC ngoJulayi 2017.
Ngokucishe kube yinyanga kamuva, i-Arsenal yashesha ukuthengisa uMalen ku-PSV Eindhoven njengoba uhlangothi lwamaNgisi lwalukholelwa ukuthi lowo owayeneminyaka engu-20 ngaleso sikhathi wayehlulekile ukuthuthuka ngokwanele ngesikhathi sokuphathwa kwezinyanga ze-13. Izindaba zombango “wokuyeka” obangelwe impikiswano zihanjiswe ngokukhala okuvela kubalandeli abachaze ngokuthi 'Kubi ukwedlula ukulahlekelwa ngu-Alexis Sanchez'.
I-Arsenal yamyeka uDonyell Malen ngoba akazange ajabulise kakhulu eqenjini lentsha lesiNgisi. Isikweletu Sezithombe: I-Arsenal.
Amaqiniso we-Donyell Malen Ingane Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
Ukuqhubeka nomsebenzi wakhe ku-PSV II, uMalen uthuthuke ngokuxhuma futhi emikhawulweni eyambona eqanjwe ngethalente elihle kakhulu le-2017-18 Jupiler League. Uqhubekele phambili wenza idokhumenti lakhe le-PSV ku-4-0 Eredivisie enqoba i-PEC ngoFebhuwari 2018 futhi wanqoba isihloko se-2018 Eredivisie nePSV ngalowo nyaka.
UDonyell Malen uzuze i-Eredivisie enePSV kwi2018. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ngokushesha phambili esikhathini sokubhala, uMalen ungenye yamathalenta amaningi wokushaya amagoli ku-ligi yeligi efunwa ngamaqembu endiza ephezulu ahlanganisa neLiverpool FC ne-Arsenal FC yakwamanye amaqembu, njengoba besho, umlando .
Amaqiniso we-Donyell Malen Ingane Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Kunamagama ambalwa nje enza uMamnn amamatheke lapho kukhulunywa ngaye ikakhulukazi wentombi yakhe - uDelisha. Yini esiyaziyo ngengxenye engcono engaba khona ngesikhathi sokubhala? Ukuqala, ungumphengululi wemvelo othanda ukuhamba nokudla ukudla okuhle. Ngaphezu kwalokho, uthande ngobuqotho ukugcina impilo yakhe yangasese kude namehlo abezindaba.
UDonyell Malen nentombi yakhe enhle uDelisha. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Yize kungaziwa okuningi ukuthi i-lovebirds yahlangana nini futhi yaqala nini ukuthandana, ibhekwa njengezithandani eziphelele ezifisa ukuhamba ezansi kwendlela ngaphambi kokwemukela indodana (namadodakazi) namadodakazi abo ukuhlanganyela othandweni lwabo.
Amaqiniso we-Donyell Malen Ingane Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Umndeni kulapho impilo iqale khona ngempela kuMalen nalapho uthando lungapheli kuye. Sikulethela amaqiniso ngokuphila komndeni wakhe.
Mayelana nobaba kaDonyell Malen: URobert Malen ungubaba kaDonyell Malen. Wadlala ibhola leqembu lentsha leSurinamese ngesikhathi sokuphila kukaMalen esemncane. URobert wehlukaniswa nonina kaMalen esikhathini esizayo kodwa nokho waba nobudlelwane obusondelene nendodana yakhe yosaziwayo eyambheka njengobaba.
Mayelana nonina kaDonyell Malen: UMariska Manshanden ungunina kaDonyell Malen. Ubambe elikhulu iqhaza empilweni kanye nokukhuphuka kwendodana yakhe ngokuyiqhuba ngokuyiqeqesha izikhathi ezingekho ngaphansi kwe-3 njalo ngeviki. Ngaphezu kwalokho, wathuthela eLondon ukuze amgcine ehlangana naye futhi, wakwenza iphuzu lokuthi athokozise uMalen ovela eziteshini eceleni kukababa wakhe omzalayo uRobert.
UDonyell Malen nonina uMariska Manshanden. Isikweletu Sezithombe: I-Volkskrant.
Mayelana nabafowabo bakaDonyell Malen: UMalen wayewukuphela kwendodana ezelwe kule nyunyana phakathi kukamama nobaba. Ngenxa yalokhu, akanabo abafowenu nodadewakhe bemvelo kodwa abancane kakhulu bezingane zakubo abazalwa nguyise bakobunye ubuhlobo.
Mayelana nezihlobo zikaDonyell Malen: Kude nempilo yomndeni kaMalen, unogogo nomkhulu baziwa njengoJoop noMarian ngokulandelana ngenkathi kungekho mibhalo ekhona yababekazi, omalume, abazala bakhe, abazala bakhe, umshana wakhe kanye nomshana wakhe ngesikhathi sokubhala.
Isithombe sika-Throwback sikaDonyell Malen nomzukulu wakhe eCamp Nou. Isikweletu Sezithombe; I-Nos.nl.
Amaqiniso we-Donyell Malen Ingane Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Ukhulume ngobuntu bukaDoyell Malen, unesimo esimangalisayo esibonisa izimfanelo ezinhle nezinhle zabantu abaqondiswa isibonakaliso sikaCapricorn Zodiac. Uyazethemba, uhlelekile, uhlakaniphile futhi usebenza kanzima ngokwenkolo.
Umdlalisi odala ukwembula imininingwane ngempilo yakhe yangasese neyangasese enezinto ezimbalwa azithandayo nezinto zokuzilibazisa ezibandakanya ukubhukuda, ukubuka ithelevishini, ukudoba nokuchitha isikhathi nabangane nomndeni.
Izinhlanzi zikaDonyell Malen zokungcebeleka. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso we-Donyell Malen Ingane Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Uyazi ukuthi inani likaDonyell Malen lisabhekwa ngesikhathi kubhalwa? Ngaphandle kwalokho, unenani lemakethe lemali engu- € 18 million neholo lonyaka elinenzuzo ebonakala ilokhu ikhuphuka ngeminyaka.
Ngenxa yalokhu, ithalente elihlaselayo lihlala impilo yobukhazikhazi ekhaya lakhe i-Eindhoven lapho lihlala khona nentombi yalo. Ngaphezu kwalokho ugibela imoto enhle futhi uhlela ukuba neyakhe indlu kungekudala.
UDonyell Malen usondela emotweni yakhe enhle. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso we-Donyell Malen Ingane Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukuqeda indaba yethu yobuntwana kaDonyell Malen kanye ne-biography, bheka iqiniso elincane noma iqiniso ongakaze uzwe ngalo.
Ukubhema Nokuphuza: UDonyell Malen akanikezwanga ukuphuza iziphuzo ezinzima, futhi akakaze abonwe ebhema ngesikhathi sokubhala. Ngomkhuba onjalo ophilile, uMalen ujoyina iqembu labadlali bebhola abathatha impilo yabo ngokungathi sína futhi ngeke benze lutho ukulihlehlisa.
Ama-tattoos: UMalen akanabo ubuciko bomzimba ngesikhathi sokubhala, futhi abalandeli abanawo ama-tattoos akhe okwamanje. Ugxila kakhulu ekuthuthukiseni umzimba wakhe, amandla kanye nokuphakama kwezindawo eziphezulu zomoya.
Umzimba kaDonyell Malen awunama-tattoos ngesikhathi sokubhala. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Inkolo: Umdlali odlalayo ngokusobala akamkhulu enkolweni futhi akakaze anikeze izikhombisi ezicacile ezinkolelweni zakhe. Ngakho-ke, angeke kushiwo ngokugunyaziwe ukuthi ungumKristu, umSulumane noma ongakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Donyell Malen Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.